Maalinta: Abriil 20, 2018
Xarun ayaa ku taal Dalaman, Muğla. Illaa iyo hadda, tareen ma imaanayo ama hal tikit lagama iibsan xafiiska sanduuqa. Soo koobiddiisa sheekadiisa oo hal erey ah “jahwareer kelime [More ...]
Sameynta Xilliga Xagaaga ee Saacadaha Kumbuyuutarka ee Denizli
Waqtiga waxaa loo beddelay adeegga Denizli Cable Car. Intaa ka dib, Denizli Cable Car Cawayska ayaa sidoo kale shaqeyn doona. Muddada adeegga gawaarida fiilada ee loo yaqaan 'Başıbaşı Plateau' ee Denizli Caasimad-magaalo ayaa la kordhiyey. Barnaamijka cusub ayaa la bilaabay maanta. Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli [More ...]
Qandaraaska loogu talo galay dhismaha Mashruuca Nidaamka Tareenka ee 27 th ee u dhexeeya Varsak iyo Zerdalilik, oo ay kireysay degmada Antalya ee Magaalaweynta Talaadada, Maarso, ayaa la saxiixay xaflad. Madaxweyne Menderes Türel, in kasta oo caqabadaha ka hor imanaya heshiiska [More ...]
GAZIRAY, oo adeeg u fidin doonta magaalada hareeraheeda Gaziantep raaxada dhulka hoostiisa mara, waxaa dejiyay Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta. [More ...]
Laga soo bilaabo Wasiirka arooska Çerkezköy Sharraxa Qadka Tareenka ee Kapıkule
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badhiga iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, HalkalıMashruuca Tareenka Tareenka Çerkezköy- Qalabaynta dhismaha dhismaha ee la xidhiidha bilawga geeddi-socodka hindisada, oo sheegaya, "Waxaan bilaabi doonnaa hindise-dhisidda mustaqbalka dhow." [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Diyarbakır Cumali Atilla ayaa kormeeray shaqooyinka ka socda Saldhigga Baska ee Bismil kaas oo dhismihiisu ka socdo aagga dhererkiisu yahay 32 kun oo 750 mitir oo laba jibaaran. Dowladda Hoose ee Magaalada Diyarbakir waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso dhismaha saldhigyada basaska casriga ah ee degmooyinka. Metropolitan [More ...]
TCDD Republic of Turkey State Tareennada Kabtanka in Vangölü Ferry Agaasinka (steamship) iyo Chief Engineer / ahaa başmakinis (steamship) tradename afka natiijada imtixaanka lagu qabtay on 13.04.2018 for badmaaxyo in la shaqaalaysiiyay markab Vangölü in la qaado si Agaasinka doon ah [More ...]
Muwaadiniinta Gaadiidka Kayseri Inc. ayaa booqday hoyga kalkaalinta Hacı Rukiye Gazioğlu. Marka la eego baaxadda mashariicda mas'uuliyadda bulshada ee ay fuliso Kayseri Transportation Inc. sanadka oo dhan, muwaadiniintu waxay isu yimaadeen dadka deggan Hacı Rukiye Gazioğlu Nursing Home [More ...]
Maalinta Saxiixa ee Antalya 3 Mashruuca Nidaamka Isgoyska Tareenka
Qandaraaska Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 27aad ee u dhexeeya Varsak iyo Zerdalilik, oo ay qabtay Dawladda Hoose ee Antalya Talaadada, 3-ka Maarso, ayaa la saxeexi doonaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11.30 iyada oo xaflad ay ka soo qayb galeen duqa magaalada Menderes Türel. Kepez [More ...]
Qaabka Dugsiga ee Dhibaatada Gawaarida ee Ankara
Duqa Magaalada Ankara Metropolitan Mustafa Mustafa Tuna wuxuu qiimeyn ku sameeyay ajendaha barnaamijka telefishanka ee uu ka qeyb qaatay. Tuna wuxuu yidhi, bazı Waxaan ka shaqeynaynaa dhismaha garoon dabaq ah ama baarkin dhulka hoostiisa ah oo loogu talagalay iskuulada qaarkood ee ku habboon xarunta. gaar ahaan [More ...]
Laydhka Magaalada Ankara ee Cusub: Kadib is casilaadii Duqa Magaalada Ankara ee Magaaladda Melih Gökçe, Mustafa Tuna wuxuu la wareegay xafiiska wuxuuna sii wadaa fulinta mashaariicda cusub midba midka kale. 2018 [More ...]